Fandraisam-peo ny ôrikesitra saifônika virtoaly voalohany ataon’ny Youtube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2008 20:20 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, 繁體中文, 简体中文, Português, Español, English
YouTube izao no mikononkonona zava-baovao ho fiaraha-mietana: Manasa ny mpahay mozika manerantany ity orinasa ity mba halaina feo (sy sary) amin'ny fananganana orikesitra saifônika avy amin'ny vazantany efatra virtoaly voalohany. Manana fotoana hatramin'ny faha28 ny volana janoary 2009 ho avy izao na ny mpankafy tsotra na ny matihanina amin'ny resaka mozika hisintona ny taratasin'ny taindalitra sy hampiseho amin'ny alalan'ny lahatsary (vidéo) izay halefany amin'ny alalan'ny serasera ny talentany (sy ny fahaizany).
Ao amin'ity dokambarotra amin'ny alalan'ny lahatsary ho an'ny ôrikesitra ity no ahitanao, ilay mpamoron-kira Shinoa Tan Dun (Tadidio ilay sarimihetsika, “Tigra mipetraka, Dragona miafina (Crouching Tiger, Hidden Dragon”?)) sy mpahay mozikamaro hafa no manasa anao: “Miaraha aminay!”. Efa vonona amin'ny fiteny mihoatra ny 12 moa ny antso.
Toy izao no atao.
Tantaran'ny Mozika farany